Askar Taabacsan Farmaajo Oo Weeraray Hooyga Cabdi Qeybdiid. – Bogga Calamada.com
Askar Taabacsan Farmaajo Oo Weeraray Hooyga Cabdi Qeybdiid.
December 30, 2017 2:39 pm Views: 137
Maleeshiyaat ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada ayaa maanta duhurkii weerar ku qaaday guriga uu magaalada Muqdisho ka deganyahay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo kamid ah xildhibaannada aqalka sare.
Weerarka oo ay fuliyeen ciidamo ku qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir oo tobankii sano ee lasoo dhaafay uu deganaa Cabdi Qeybdiid, lamasoo sheegin wax iska hor’imaad ah oo ay sameeyeen ciidamada ilaalada ka hayay guriga.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Koofiya guduudda loo yaqaan ee ilaaliya Villa Somalia ay gudaha ugaleen guriga Cabdi Qeybdiid iyagoona gacanta ku dhigay Kumbiyuuterro iyo dukumiintiyo kale.
Horraantii bishan ayay aheyd markii sidaan oo kale weerar loogu qaaday Guriga Cabdi Raxmaan Cabdi shakuur halkaas oo lagu dilay 6 askari oo ilaala u ahaa waxaana weerarkaas ka dhashay xiisado siyaasadeed iyo kuwa amniga oo Muqdisho laga dareemay.
Dastuurka DF-ka ayaa dhigaya in aan wax baaritaan ah lagu sameyn Karin guriga qof xildhibaan ah illaa laga qaado xasaanadda xildhibaanimo waxaana muuqata in dowlad ku sheegta Muqdisho kajirta ay laashay dhammaan wixii heshiisyo ah ee ay horay ugu ballameen.